I-china Pressure-resistant flange type vacuum mixing tank Umkhiqizi nomhlinzeki | Qiangzhong
Ingcindezi-ukumelana Uhlobo Flange Ukuxuba Tank
Isetshenziswa kabanzi ezimbonini zezindawo zokuphisa utshwala, imikhiqizo yobisi, isiphuzo, amakhemikhali ansuku zonke, ama-bio-pharmaceuticals, njll Hlanganisa, hlakaza, emulsify.homogenize, ezokuthutha, i-batch ……
Itanki lokuxuba lensimbi elingenasici lisetshenziswa kakhulu ezimbonini ezinjengokumboza, okokwenza imithi, izinto zokwakha, amakhemikhali, izingulube, izinhlaka, ukudla, ucwaningo lwesayensi, njll. Kungenziwa ngensimbi engagqwali 304, 304L, noma 316, kuya ngamakhasimende inketho. Futhi amadivayisi wokushisa nokupholisa angakhethwa ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zokukhiqiza noma inqubo. Ukushisa kutholakala ekushiseni kwejacket kagesi kanye nokushisa kwekhoyili. Imishini inezici zokwakheka kwesakhiwo ezinengqondo, ubuchwepheshe obuthuthukisiwe nokuqina, ukusebenza okulula nokusetshenziswa okulula. Kuyimishini ekahle yokucubungula enotshalomali oluncane, ukusebenza okusheshayo nenzuzo ephezulu.
• Ithangi lokuxubana ikakhulukazi liqukethe umzimba wethangi, ikhava, i-agitator, izinyawo ezisekelayo, idivaysi yokudlulisa, idivaysi ye-shaft seal, njll.
• Umzimba wamathangi, ikhava, i-agitator kanye ne-shaft seal kungenziwa nge-carbon steel, insimbi engagqwali noma ezinye izinto ngokuya ngezidingo ezithile.
• Umzimba wethangi nesembozo kungaxhunywa nge-flange seal noma nge-welding. Futhi zingaba namachweba ngenhloso yokondla, ukukhipha, ukubuka, ukukala izinga lokushisa, ukukala kwengcindezi, ukuhlukaniswa kwesitimu, ukuphepha, njll.
• Idivayisi yokudlulisa (imoto noma isinciphisi) ifakwe ngaphezulu kwekhava, futhi ingashayela i-agitator eceleni kwethangi ngokugudluza shaft.
• I-shaft seal ingasetshenziswa uphawu lwe-mechanical, i-pack ng seal noma i-labyrinth seal njengoba kuceliwe.
• Uhlobo lwe-agitator lungaba impeller, ihange, ifreyimu, uhlobo lokuvunguza. njll ngokusho kwezidingo zohlelo lokusebenza oluhlukile.
Langaphambilini Ithangi lokuxubana le-lid evulekile le-2000L
Olandelayo: Insimbi Yensimbi Engagqwali Izithako Zokuhambisa Ithangi
Ukuxhunywa kwe-flange yokuxhuma insimbi engagqwali
Ukucindezela komshini wokushisa wokushisa wokushisa
I-2000L ithangi lokuxuba lokushisa okushisa kabili
I-tank yokuxuba yokufudumeza insimbi engenasici
Ukuhlakazeka Ukuxuba Tank
Ukuxuba i-Reactor (i-flange typoe)
I-50L laboratory yokushisa kagesi ethangini